Ọrụ ndị nchụàjà na ọrụ ndị Livaị (1-7)
Òkè a ga na-enye ndị nchụàjà (8-19)
Ọgbụgba ndụ ga-adịgide adịgide (19)
Ndị Livaị ga na-anata otu ụzọ n’ụzọ iri, na-enyekwa ya (20-32)
18 Jehova wee gwa Erọn, sị: “Gị na ụmụ gị ndị nwoke na ndị si n’ọnụmara gị ga-aza ajụjụ mgbe ọ bụla e mebiri iwu na-achị ebe nsọ.+ Gị na ụmụ gị ndị nwoke ga-azakwa ajụjụ mgbe ọ bụla e mebiri iwu na-achị ndị nchụàjà.+ 2 Kpọtakwa ụmụnne gị ndị si n’ebo Livaị, bụ́ ebo nna gị, nso, ka ha soro gị na-ejere gị na ụmụ gị ndị nwoke ozi+ n’ihu ụlọikwuu igbe ọgbụgba ndụ dị na ya.*+ 3 Ha ga na-arụ ọrụ i nyere ha na ọrụ niile gbasara ụlọikwuu ahụ.+ Ma, ha agaghị abịa arịa ndị dị n’ebe nsọ ahụ nakwa ebe ịchụàjà ahụ nso, ka hanwa ma ọ bụ ununwa ghara ịnwụ.+ 4 Ha ga-esoro gị na-arụ ọrụ niile gbasara ụlọikwuu nzute, na-ejekwa ozi niile ha kwesịrị ije n’ụlọikwuu. Onye na-abụghị onye nchụàjà* agaghị abịa unu nso.+ 5 Unu ga na-arụ ọrụ unu kwesịrị ịrụ n’ebe nsọ+ nakwa n’ebe ịchụàjà+ ka m ghara iwesa ndị Izrel iwe ọzọ.+ 6 M si ná ndị Izrel kpọrọ ụmụnne unu, bụ́ ndị Livaị, kpọnye unu ka ha bụrụ onyinye m nyere unu.+ Ha bụ ndị e nyere Jehova ka ha na-eje ozi n’ụlọikwuu nzute.+ 7 Ọ bụ gị na ụmụ gị ndị nwoke ga na-arụ ọrụ nchụàjà n’ebe ịchụàjà nakwa n’ime ebe ahụ e gebichiri ákwà mgbochi.+ Ọ bụ unu ga na-eje ozi a.+ Enyela m unu ọrụ nchụàjà ka ọ bụrụ onyinye m nyere unu. Onye ọ bụla na-abụghị onye nchụàjà* bịara nso, a ga-egbu ya.”+ 8 Jehova gwakwara Erọn, sị: “M meela gị onye na-ahụ maka onyinye ndị a na-enye m.+ Enyela m gị na ụmụ gị ndị nwoke ụfọdụ n’ime ihe niile dị nsọ ndị Izrel na-enye n’onyinye ka ha bụrụ òkè a ga na-enye unu mgbe niile.+ 9 Ihe ndị a ga-abụ nke gị n’ime àjà ndị kacha nsọ a na-esu ọkụ: àjà ọ bụla ha na-achụ, ma àjà ọka ha+ ma àjà mmehie ha+ ma àjà ikpe ọmụma ha,+ bụ́ ndị ha na-ewetara m. Ọ ga-abụrụ gị na ụmụ gị ndị nwoke ihe kacha nsọ. 10 Ị ga-anọ n’ebe dị ezigbo nsọ rie ya.+ Onye ọ bụla bụ́ nwoke nwere ike iri ya. Ọ ga-abụrụ gị ihe dị nsọ.+ 11 Ihe ndị a ga-abụkwa nke gị: onyinye ndị ha na-enye+ nakwa àjà niile a na-efegharị efegharị+ ndị Izrel na-eweta. Ewerela m ha nye gị na ụmụ gị ndị nwoke na ụmụ gị ndị nwaanyị ka ha bụrụ òkè unu mgbe niile.+ Onye ọ bụla dị ọcha nọ n’ụlọ gị nwere ike iri ya.+ 12 “M na-enye gị+ mmanụ niile kacha mma na mmanya ọhụrụ niile kacha mma nakwa ọka,* bụ́ mkpụrụ mbụ ha,+ ndị ha na-enye Jehova. 13 Mkpụrụ mbụ kara aka n’ime ihe niile si n’ala ha, bụ́ ndị ha ga na-ewetara Jehova, ga-abụ nke gị.+ Onye ọ bụla dị ọcha nọ n’ụlọ gị nwere ike iri ha. 14 “Ihe ọ bụla e wepụtara iche n’Izrel ka ọ bụrụ nke Chineke* ga-abụ nke gị.+ 15 “Nwa mbụ nke ihe niile dị ndụ*+ ha ga-ewetara Jehova, ma ọ̀ bụ mmadụ ma ọ̀ bụ anụmanụ, ga-abụ nke gị. Ma, ị ga-agbara nwa mbụ mmadụ mụrụ.+ Ị ga-agbarakwa nwa mbụ anụmanụ na-adịghị ọcha mụrụ.+ 16 Ị ga-eji ego ole e ji agbara ya gbara ya mgbe ọ dị otu ọnwa ma ọ bụ karịa, ya bụ, shekel* ọlaọcha ise e kwuru na ọ bụ ọnụ ahịa ya,+ ma e jiri shekel dị n’ebe nsọ* tụọ ya. Ọ bụ gira* iri abụọ. 17 Ọ bụ naanị oké ehi e bu ụzọ mụọ ma ọ bụ ebule e bu ụzọ mụọ ma ọ bụ ewu e bu ụzọ mụọ ka ị na-agaghị agbara agbara.+ Ha bụ ihe dị nsọ. Ị ga-efesa ọbara ha n’ebe ịchụàjà.+ Ị ga-esukwa abụba ha ọkụ ka ha kwụọ anwụrụ ọkụ. Ha bụ àjà a na-esu ọkụ, àjà na-esi ísì ọma* a na-achụrụ Jehova.+ 18 Anụ ha ga-abụ nke gị. Ha ga-abụ nke gị otú ahụ okpuru afọ* anụ e ji achụ àjà a na-efegharị efegharị nakwa ụkwụ aka nri ya bụ nke gị.+ 19 Enyela m gị na ụmụ gị ndị nwoke na ụmụ gị ndị nwaanyị onyinye niile dị nsọ ndị Izrel ga na-enye Jehova+ ka ọ bụrụ òkè unu mgbe niile.+ Ọ ga-abụrụ gị na ụmụ gị ọgbụgba ndụ ga-adịte aka* n’ihu Jehova.” 20 Jehova wee sị Erọn: “Ị gaghị eketa ala n’ala Izrel, e nweghịkwa ala ha ga-abụ nke gị.+ Abụ m òkè gị, bụrụkwa ihe ị ga-eketa n’etiti ndị Izrel.+ 21 “Lee, enyela m ụmụ Livaị otu ụzọ n’ụzọ iri nke ihe ọ bụla+ ndị Izrel rụtara* ka ọ bụrụ ihe ha ketara maka ozi ha na-eje, ya bụ, ozi ha na-eje n’ụlọikwuu nzute. 22 Ndị Izrel agaghịzi na-abịa nso n’ụlọikwuu nzute, ka ha ghara ibutere onwe ha mmehie ma nwụọ. 23 Ọ bụ ndị Livaị ga na-eje ozi ndị gbasara ụlọikwuu nzute, ọ bụkwa ha ga na-aza ajụjụ maka mmehie ndị Izrel.+ Ọ bụ iwu ga-adịgide adịgide n’ọgbọ unu niile na ha agaghị eketa ala ọ bụla n’etiti ndị Izrel.+ 24 N’ihi na enyela m ndị Livaị otu ụzọ n’ụzọ iri ndị Izrel ga na-eweta, nke ha ga na-enye Jehova, ka ọ bụrụ ihe ha ketara. Ọ bụ ya mere m ji sị ha, ‘Ha agaghị eso ndị Izrel keta ala ọ bụla.’”+ 25 Jehova gwaziri Mosis, sị: 26 “Gwa ndị Livaị, sị, ‘Unu ga-anara ndị Izrel otu ụzọ n’ụzọ iri m si n’aka ha nye unu ka ọ bụrụ ihe unu ketara.+ Unu ga-esikwa n’otu ụzọ n’ụzọ iri ahụ nye Jehova otu ụzọ n’ụzọ iri.+ 27 A ga-ewere ya na ọ bụ onyinye unu, ka à ga-asị na ọ bụ ọka* nke si n’ebe unu na-azọcha ọka+ ma ọ bụ mmanya buru ibu nke si n’ebe unu na-azọchapụta mmanya ma ọ bụ mmanụ buru ibu nke si n’ebe unu na-azọchapụta mmanụ. 28 Unu ga-esi otú a si n’otu ụzọ n’ụzọ iri niile unu na-anata ndị Izrel na-enye Jehova onyinye. Unu ga-esikwa na ha na-enye Erọn onye nchụàjà onyinye Jehova. 29 Unu ga-esi n’onyinye niile kacha mma a na-enye unu nye Jehova ụdị onyinye ọ bụla,+ ka ọ bụrụ ihe dị nsọ. 30 “Ị ga-agwakwa ha, sị, ‘Mgbe unu ndị Livaị si na ha nye ihe kacha mma n’onyinye, a ga-ewere ya ka à ga-asị na ọ bụ ọka si n’ebe unu na-azọcha ọka na mmanya si n’ebe unu na-azọchapụta mmanya ma ọ bụ mmanụ si n’ebe unu na-azọchapụta mmanụ. 31 Unu na ndị ezinụlọ unu nwere ike ịnọ n’ebe ọ bụla rie ya n’ihi na ọ bụ ụgwọ ọrụ unu maka ozi unu na-eje n’ụlọikwuu nzute.+ 32 Unu agaghị ebutere onwe unu mmehie n’ihe a ma ọ bụrụhaala na unu na-enye ihe kacha mma n’ime ha n’onyinye. Unu emerụkwala ihe ndị dị nsọ ndị Izrel na-eweta, ka unu ghara ịnwụ.’”+
^ Na Hibru, “Onye mbịarambịa ọ bụla,” ya bụ, nwoke na-esighị n’ezinụlọ Erọn.
^ Ya bụ, ihe ọ bụla e dooro Chineke nsọ, bụ́ ihe e nyere Chineke nke a na-enweghị ike ịgbara agbara.
^ Na Hibru, “nke anụ ahụ́ niile.”
^ Otu gira bụ gram 0.57. Gụọ B14.
^ Na Hibru, “ọgbụgba ndụ nnu.”
^ Ya bụ, ụmụ anụmanụ ha nakwa ihe ndị ha nwetara n’ubi.